I-Verzasca Valley - iRustico eqhelekileyo - I-Airbnb
I-Verzasca Valley - iRustico eqhelekileyo
Indlu yeholide eyakhiwe ngamaplanga yonke sinombuki zindwendwe onguValérie & Marcel
UValérie & Marcel yi-Superhost
Le chalet ikwindawo edumileyo yaseValle Verzasca. Ilahlekile ehlathini kodwa ngemizuzu emi-5 kuphela ukusuka kwindawo yokupaka, imoto yekhebula (izinto zakho kuphela) ikunceda ekufikeni kwakho, ukufikelela kwi-chalet unohambo lwe-5 min. Le ndawo izolile kwaye ingqongwe ziiAlps ezintle zaseSwitzerland.
Le chalet i-rustic, uya kuba nekhitshi elikhulu elinefriji kunye ne-oveni. Kumgangatho wokuqala kukho amagumbi ayi-2, enye ine queen size nebhedi yabantwana abayi-2 kwelinye igumbi unebhedi eziyi-2. Ijikelezwe lihlathi le ndawo izolile kwaye izolile.
I-Chalet ikwindawo edumileyo yeValle Verzasca embindini weeAlps zaseSwitzerland. EGerra nakwiindawo ezikungqongileyo kukho iindawo zokutyela ezahlukeneyo, kwaye eBrione kukho ivenkile encinci yokutya. I-Gerra imalunga ne-30 mins kude ne-Locarno, kunye ne-10-15 mins kude neLavertezzo. Yindawo entle yokukhwela intaba kunye nokuphumla emlanjeni.
Umbuki zindwendwe ngu- Valérie & Marcel
Siyiyure enye kude neChalet, kodwa ukuba ufuna nantoni na esinayo ngomyalezo okanye ngefowuni!